तिहारको रमझम ! | News Nepal
तिहारको रमझम !
सरस्वती पाण्डे/मैले केही दिनअघि हामी नेपालीहरूको दोस्रो महान् चाड तिहालाई लक्षित गरेर नेपालमा फूलको आयात, निर्यात र आफैंले फूल उत्पादनको बारेमा लेखेंको थिएँ । आज भने म तिहरमा प्रयोग हुने सामग्रीहरूमा मूल्य वृद्धि र तिहारको चहलपहलका बारेमा आफ्ना मनमा उब्जेका कुराहरू लेखेकी छु । अब लागौँ विषयतिर नै !
शहरका विभिन्न ठाउँहरूमा मानिसहरूको चहलपहल छ । काठमाडौँ उपत्यकामा अझ गाह्रो अवस्था आइसकेको छ । दशैं मान्न गाउँ गएकाहरू उपत्यका भित्री सकेका धेरैको संखयामा । कोही गाउँमै रहेका छन् । गाउँमा हुनेहरू तिहार र छठपछि पक्कै पनि शहर आउने छन् । अनि काठमाडौँमा साविककै जस्तो जनचाप हुन्छ नै । तर,जे होस्, दुःखै गरेर भए पनि शहर बस्न मन लागिहाल्छ नि !
मैले यति धेरै पृष्ठभूमि जोड्नुको अर्थ भिडभाड कतिसम्म छ भन्न खाजेको हो । यता जाऊ, उता जाऊ भिडैभिड ! सामान किन्नेको भिड । साँगुरा हाम्रा सडकमा अटेस-मटेस हुँदै न्युरोड, बसन्तपुर, असन आदि मुख्य व्यापारिक ठाउँमा यो देखिन्छ । अझ हामी चेलीहरूलाई त तिहार आउँदा केही खर्च अवश्य पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । दाजु–भाईलाई भाइटीकाको दिन दिने आवश्यक सामग्रीहरू किन्नै पर्छ । भाईमसला भन्ने सामान किन्नेहरूको चहलपहलले गर्दा साँच्चै तिहार आएजस्तो पनि लाग्छ । त्यसो त यो बाहेक अन्य दैनिक उपभोग्य सामान किन्नको लागि पनि भिडभाड भैहाल्छ नि !
बजारमा गएर कुनै पनि खाद्य पदार्थको हास् या लत्ता कपडाको मूल्य छोइसाध्य छैन । सुनको जस्तो मूल्य ! सरकारले सुपथमूल्य पसल राखे पनि त्यसमा पनि विचौलीया हावी भएको देखिन्छ । मूल्य पनि यतिसम्म बढाएका छन् कि सुन्दा नै पसिना आउने । हेर्नुस् त ! काजु प्रतिकेजी १७ सय रुपैयाँसम्ममा किन्न पाइने । यस्तै पहिला ४ सय ५० रुपैयाँ प्रतिकेजीमा पाइने ओखर अहिले ६ सय ५० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ । केजीको ३ सय ७५ रुपैयाँ पर्ने नरिवलको मूल्य पनि बढेर ५ सय ५० रुपैयाँ पुगेको छ । पेस्तामा पनि चार सय रुपैयाँसम्म बढेको छ । प्रतिकेजी १९ सय रुपैयाँमा पेस्ता उपभोक्ताले किनिरहेका छन् । यसअघि १५ प्रतिकेजीको मूल्य थियो । यता बदाम साढे १४ सय प्रतिकेजी, छोकडा २ सय २५ रुपैयाँ प्रतिकेजी, खुर्पानी प्रतिकेजी १५ सय, अन्जिर प्रतिकेजी २ हजार रहेको छ । यस्तै अलैँची प्रतिकेजी १२ सय रुपैयाँ रहेको छ । यसअघि हजार रुपैयाँसम्ममा पाइन्थ्यो । ल्वाङ प्रतिकेजी १५ सय रुपैयाँसम्म लिएर व्यवसायीहरूले बिक्री गरिरहेका छन् । दालचिनी प्रतिकेजी १ सय २५ रुपैयाँले बढेर ५ सय रुपैयाँ पुगेको छ । सुपारी सात सय ५० रुपैयाँ प्रतिकेजीमा बिक्री भइरहेको छ ।
यस्तो डरलाग्दो मूल्य । कसरी किनेर कसरी तिहार मनाउने ? हुने खानेले त किन्न सक्लान र राम्रोसँग मनाउलान । नहुनेले के गर्ने ? के चाड नै नमनाउने ? सबैले बनाउँदा, महनाउने रहर हुँदैन र ? हुन्छ अवश्य हुन्छ । नहुने कुरै हुँदैन । चाहना हुन्छ । इच्छा हुन्छ । संवेग हुन्छ । न्युन आय भएका जनताका लागि पनि सरकारले चाडवाड मनाउने वातावरण बनाइदिनु पर्छ । सबै मिलेर चाडबाड मान्नु नै चाडबाडको विशेषता हो । सरकारले प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्दा पनि व्यवसायीले मनलाग्दी मूल्य बढाउने गर्छन् । यो सत्य हो । सरकारले अुनगमत त गर्छ तर एकदम फितलो । हामी कहाँनीर चुकेका छौँ ? के हाम्रा अनुगमन गर्ने कर्मचारीहरू पनि कतै पैसामा विकेका छन् कि ? शंका गर्ने ठाउँहरू प्रशस्तै छन् । आशा छ, सरकारले मूल्यवृद्धि रोक्ने छ र जनतालाई मूल्यभार ज्यादा पर्ने छैन ।
अब लागौं तिहारकै अर्को रमाइलो प्रसंगतिर । तिहार आफैं पनि रंगीन पर्व हो । रंगीन दुनियाँमा रंगहरूको कुनै कमी नै छैन हामीलाई । फूल रंगीन, टीका त उसै रंगीन । रमाइलो पनि कति हुन्छ भनेनी–शहर विभिन्न रंगीबिरंगीका बत्तीले झिलीमिली । देउसी र भैली पनि उत्तिकै । साँस्कृतिक पर्वको बहुमुखी रौनकता हाम्रो जस्तो अरू कसको होला र ! आफैंमा गौरब , आफैंमा खुसीको अनुभूति । तिहारले गर्दा काठमाडौँ उपत्यका, पोखरा लगायका शहरहरू बेहुली झैँ देखिन्छन् । आहा ! हेर्दै आनन्द आउँछ । यसले तिहारको महिमालाई विशेष गरी बुझाउँछ । काग, कुकुर, गोवद्र्धन, लक्ष्मी, भाइको पूजा गर्दा तिहार साँच्चै रमाइलो । तिहारमा जथाभावी रूपमा पटका पट्काउन भने छाडौँ है ! साना–भाई बहीनीहरू ! यसको सट्टामा अरू नै काम गरेर पनि मनोरञ्जन लिन सकिन्छ । सबै सचेत भएर, आफ्नो गक्ष अनुसार तिहार मनाउनुपर्छ ।
काठमाडौं । नेपाल १९ वर्षमुनिको एसिया कप क्रिकेटमा छनोट भएको छ। मंगलबार पूर्वी क्षेत्र छनोटको फाइनलमा हङकङमाथि विकेटको शानदार जित...
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पापर्टी (नेकपा)का बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले सरकारका काम अलोकप्रिय बन्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका...